पोखराको सरकारी जग्गामा बिचौलियाको रजाइँ – Hamro Lumbini
पोखराको सरकारी जग्गामा बिचौलियाको रजाइँ
गीत चोरेको आरोपमा भुवन केसीविरुद्ध उजुरी
अनुहारको सौन्दर्यका लागि कोरियन ब्यूटी टिप्स यस्ता छन् जुन तपाईले घरमै गर्न सक्नुहुन्छ !
कान दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? ५ मिनेटमै निको पार्ने यस्तो छ घरेलु उपाय !!
By admin -- March 7, 2018
No Comments on पोखराको सरकारी जग्गामा बिचौलियाको रजाइँ
पोखरा, नयाँबजारको गण्डकी मिनी मार्केटले चर्चिएको पाँच रोपनी तीन आना जग्गा कृषि विकास ब्यांकको हो । ब्यांकको मुख्य शाखा कार्यालय, पोखराले स्थानीय केही व्यक्तिको कब्जामा रहेको यो जग्गा भोगचलन गर्ने प्रयास २०६९ सालदेखि गर्दै आएको छ, तर पाएको छैन । बमबहादुर कार्की, सन्तोष सोनाम र दिनेश दाहाल क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहेको समूहले उक्त सरकारी जग्गामा ‘मिनी मार्केट’ बनाएर भाडामा लगाएका छन् । जग्गा खाली गर्ने ब्यांकको आग्रहलाई उनीहरूले वास्ता गरेका छैनन् ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर-टहरा । तस्वीरहरूः युनिश गुरुङ
‘कुनै राय, सल्लाह र करारनामा विना अनधिकृत रूपमा कब्जामा लिएको’ जग्गा खाली गर्न पटक–पटक भनेको ब्यांक प्रशासनको भनाइ छ । ब्यांकको पृथ्वीचोकस्थित मुख्य शाखा कार्यालयका कामु प्रबन्धक रामचन्द्र अर्याल उल्टै धम्की दिएर ब्यांंकका कर्मचारीलाई जग्गामा छिर्न नदिएको बताउँछन् । कृषि विकास ब्यांकको शाखा कार्यालय भने चिप्लेढुङ्गामा भाडाको घरमा छ । ब्यांक नयाँबजारको जग्गामा भवन बनाएर सर्ने प्रयासमा छ । त्यसक्रममा जग्गामा ‘ब्यांक भवन निर्माणस्थल’ भनेर राखिएको बोर्ड मिनी मार्केट सञ्चालकहरूले तत्कालै फालिदिएको कामु प्रबन्धक अर्याल बताउँछन् । “ब्यांकलाई भवन निर्माणका लागि जग्गा छोड्न पटकपटक गरेको लिखित र मौखिक आग्रह टेरेनन्” अर्याल भन्छन्, “७ मंसीर २०७४ मा स्थानीय पत्रिकामा निकालेको ३५ दिने सूचनालाई पनि बेवास्ता गरे ।”
मिनी मार्केट सञ्चालकहरूले उक्त जग्गामा १०० वटा टहरा बनाएर भाडामा लगाएका छन् । ती टहरामध्येका एक पसलेले मासिक रु.७ हजार भाडा तिर्ने गरेको बताए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पसलेको अनुमानमा, मिनी मार्केट सञ्चालक समूहले यहाँबाट वार्षिकरु.१ करोड हाराहारी कमाइरहेका छन् । यत्रो कमाइ गरे पनि समूहले न जग्गाधनी ब्यांकलाई भाडा बुझाउँछ न त महानगरपालिकालाई कर तिर्छ ।
पोखरामा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर लाभ लिएको अर्को उदाहरण हो– पृथ्वीचोक नजिकै संचालित पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल । यो अस्पतालले चर्चिएको २६ रोपनी जग्गा यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीको हो । यातायात कार्यालयले यो जग्गामा भवन बनाउन खोजिरहेको छ, तर अस्पताल सञ्चालकहरू छोड्न मानिरहेका छैनन् । “जग्गा खाली गराउन पटक–पटक लिखित र मौखिक अनुरोध ग¥यौं” यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीका सूचना अधिकारी भरतमणि बराल भन्छन्, “सार्वजनिक सूचना जारी र माइकिङ पनि ग¥यौं, तर टेरेनन् ।”
अस्पताल संचालकहरूले त्यहाँ पहिला सरकारले बनाएका भवन र टहराहरू समेत भाडामा लगाइरहेका छन् । त्यो जग्गा पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड -(एनसीसीएन) को नाममा थियो । २२ साउन २०७१ मा सरकारले एनसीसीएन खारेज गरेपछि जग्गा र भौतिक संरचना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत पुग्यो । अहिले यो जग्गाको लालपुर्जा यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीको नाममा छ । जग्गामा बनेका भवन उपयोग गर्ने अधिकार पनि उसकै छ ।पोखरा लेख्नाथ महानगरपालिकाले सिर्जनाचोकमा व्यापार प्रयोजका लगि बनाएको शपङि कम्प्लेक्स
अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले यो जग्गा २०५९ सालमा एनसीसीएनबाट भाडामा लिएको हो । त्यो सम्झैता गत वर्ष सकिएको छ । सहकारीमा अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेलगायत २९ जनाको समूह छ । नाफा कमाउने उक्त समूहले अस्पताल संचालनसँगै प्रति सटर रु.३ लाख अग्रिम भुक्तानी लिएर १० वटा सटर भाडामा लगाएको छ । सटर भाडामा लिएका व्यक्तिहरूले सहकारीलाई मासिक रु. ११ हजारदेखि २० हजारसम्म भाडा बुझउँछन् ।
सरकारी सम्पत्तिमा बिचौलियाहरूले मस्ती गरेको अर्को उदाहरण पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ९पहिले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल० को रामघाटस्थित जग्गा पनि हो । प्रतिष्ठानको पाँच रोपनीभन्दा बढी जग्गा तीनदशकबाट अतिक्रमणमा परेको छ । २०४१ सालदेखि अस्पतालकै कर्मचारीले अतिक्रमण गर्न थालेको यो जमीनमा अहिले २८ वटा घर छन् । २०३४ सालमा अस्पताल स्थापना हुँदा दान र अधिग्रहणबाट २०७ रोपनी जग्गा जुटाइएको थियो । अहिले त्योमध्ये १७० रोपनी मात्र बाँकी रहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।
पोखराका केही व्यक्ति र समूह सके सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नसके सेटिङबाट सस्तो भाडामा लिएर महँगोमा लगाई नाफा खान पहिल्यैदेखि सक्रिय छन् । यसबाट आम नागरिकले खुला ठाउँ उपयोग गर्न तथा सरकार र स्थानीय तहले कर नपाउने भइरहेको छ । यसको एक उदाहरण पृथ्वीचोकस्थित नेपाल वायु सेवा निगमको पाँच रोपनी जग्गा पनि हो । कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले यो जग्गा १ वैशाख २०६३ सालमा ११ वर्षको लागि भाडामा लिएर भरत गुरुङलाई भाडामा दिए । गुरुङले पनि आफ्नो नाफा राखेर शिव खनाललाई भाडामा लगाए ।
नागरिक उड्डयन कार्यालयले २०७२ चैत मसान्तसम्मका लागि श्रेष्ठलाई जग्गा दिंदा प्रति महीना रु.३० हजार ५०० भाडा तोकिएको थियो । सम्झैतामा हरेक दुई वर्षमा २५ प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने शर्त थियो । त्यस अनुसार अन्तिम वर्ष २०७२ सालमा प्रति महीना रु.६४ हजार भाडा पुगेको थियो । तर, श्रेष्ठले डेढ वर्ष बढी २२ असार २०७४ सम्म जग्गाको भाडा असुलेर पछिल्लो १५ महीनाको भाडा निगमलाई बुझएनन् । निगमको पोखरा कार्यालयका लेखा अधिकृत सूर्य नेपालीका अनुसार, श्रेष्ठले बिजुली र पानीको महसुल समेत गरी रु.१ करोड ८५ लाख तिर्न बाँकी छ । “बारम्बार पत्र पठायौं, पत्रिकामा सूचना छाप्यौं, तर उनले वास्तै गरेनन्”, नेपाली भन्छन् ।
अहिले विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेको जग्गा कुनै समय आम नागरिकको अर्थात् सार्वजनिक थियो । अधिकांश जग्गा २०६२र६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारी कार्यालयहरूले आ–आफ्ना नाममा लालपुर्जा बनाएको अभिलेखले देखाउँछ । पोखरा महानगरले अहिले भाडामा लगाइरहेको जग्गा, शपिङ कम्प्लेक्सहरूको लालपुर्जा २०६४ पछि निकालेको महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानून अधिकृत नारायणप्रसाद शर्मा बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, “त्यसअघि त पोखराको न्यूरोडस्थित महानगरको कार्यालय र वडा कार्यालयहरू समेत सार्वजनिक जग्गामा थिए ।”
महानगरले आफ्नो नाममा बनाएका महेन्द्रपुल, राष्ट्रब्यांक चोकलगायत ठाउँका टहराहरू पञ्चायतकालमै बनेका हुन् । यस्तै, सिर्जनाचोकमा अहिले निर्माण भएको शपिङ कम्प्लेक्समा पनि कृषिलगायत प्रयोजनका लागि पञ्चायतकालमा बनाइएका सटरहरू थिए । त्यस्तै, अहिले जिल्ला समन्वय समिति ९जिसस० को नाममा रहेको सिर्जनाचोकको पोखरा मिनी मार्केट २०७० अघिसम्म सार्वजनिक जमीन थियो । स्थानीयवासीले त्यो जग्गामा उद्यान बनाउन माग गर्दै सिर्जनापार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति बनाएर आन्दोलन नै गरेका थिए । समितिका संयोजक डम्बरबहादुर केसी भन्छन्, “तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएको मौका पारेर जिविसले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर मिलेमतोमा ठेक्कामा लगायो ।”
खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि युवराज श्रेष्ठले तयार परेको रिपोट
घर बनाउदै हुनुहुन्छ ? सस्तो र सुरक्षित घर ३ लाखमै बनाउन सकिने